Muuri News Network » XOG: DF oo ku soo baraarugtay Qorshe Cajiib ah oo Al shabaab ay ka Wadaan Muqdisho..
XOG: DF oo ku soo baraarugtay Qorshe Cajiib ah oo Al shabaab ay ka Wadaan Muqdisho..
illo Xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in Wasaarada Amaanka ee Xukuumada Soomaaliya ay isha si dhaw ula raaceeyso Xaruumo ganacsi oo ku yaala Magaalada Muqdisho.
Xogta ayaa sheegeysa in wakiilo gaar ah oo ka tirsan Maleeshiyada Al-shabaab ay goobaha ugu waaweyn Muqdisho bil waliba ka qaadan Canshuur, iyadoona ay DF iminka kusoo baraarugtay arrintaasi.
Ciidamo dhar cad oo loogu tallo galay dabagalka arrintaasi ayaa iminka laga howlgaliyay qeeybaha lagu tuhmaayo in Al-shabaabka ay ka uruuriyaan canshuurtaasi, waxaana la tilmaamayaa in ilaa iyo hadda goobahaasi laga warqabo ay gaarayaan 43 goobo ganacsi.
Xogtu waxa ay intaa kusii dareysaa in wasaarada amniga ay ku howlan tahay qaabkii ay goobahaasi kusoo galin laheyd gacanta Dowlada, waxaana la tilmaamayaa in qaarkood ay lacagahaasi ku diraan EVC, halka qaarkoodna ay ka qaadan xubno Maleeshiyada ay usoo xil saaratay.
Geesta kale, Maleeshiyada Al-shabaab ayaa DF Somalia kala dagaalameysa dhan waliba, waxa ayna dadku yihiin kuwa si aad ah kaga cabsada Al-shabaab sababo la xiriira Dowlada oo aan amaankooda sugi karin.